Iibso Biyo -La'aanta 1M/2M/3M/5M/10M EL Wire LED Neon Light Strip - Maraakiib Bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
ereeya 1 mitir 3.3FT 2 mitir 6.6FT 3 mitir 9.9FT 5 mitir 16.5FT 10 mitir 33FT
Shahaadada: CQC, CCC, CE
Nooca xariijinta: Wareegga 2-silig
Celceliska Nolosha (saacadaha): 5000
Abuurka Awooda: Beddel
Nooca Shayga: Xarag
Biyuhu waa: Haa
Heerka Midabka (K): 2800-6500k
Nambarka Moodeelka: E43151
Nalalka Nalalka/M: 1
Siligga EL waa silig naxaas ah oo khafiif ah oo lagu dahaadhay fosfoor kaas oo iftiiminaya 360 digrii oo aan kala go 'lahayn marka koronto kale la adeegsado. Waxaa loo laaban karaa sidii tuubo neon dhuuban oo ka dhigaysa mid ku habboon qurxinta dabacsan. Iftiin noloshaada oo madadaalo!
Dabacsanaan leh oo aan biyo u adkaysan karin, ayaa lagu qaabili karaa qaab kasta oo loo jari karaa dherer kasta Waxay bixin kartaa 360 darajo oo iftiimin Badbaadinta Tamarta, cimri dheer
Dhexroor silig: qiyaastii 2.3mm
Dhererka iftiinka EL: 1M/2M/5M/10M
Nolosha:> 12,000 saacadood
10 Midab: Casaan/Jaalle/Jaalle/Cagaar/Buluug/Midab/Pink/Cadaan/Cagaar Fluorescent/Buluug Baraf
Codsiga ugu weyn ee EL Wire:
Barkinta kursiga baabuurka, daboolka kursiga, daboolka isteerinka, qurxinta alwaax ka samaysan, qurxinta baabuurka, gudaha baabuurka, sanduuqa qalabka sanduuqa.
Shaashka kombiyuutarka ee hufan ee qurxinta gudaha iyo dibaddaba, dabaysha fiilooyinka, jiirka, kiiboodhka.
Qurxinta geedka kirismaska, Kaararka kirismaska, hadiyadaha kirismaska, hadiyadaha fasaxa.
Alaabta lagu ciyaaro ee elektaroonigga ah, muraayadaha buluugga dhalaalaya, suumanka xayawaanka, boorsooyinka dhabarka, koofiyadaha, boorsooyinka gacanta, dharka, kabaha, qurxinta baaskiillada, taleefanka gacanta ee suumanka hillaaca, giraanta gacanta ee iftiinka leh (qoorta), iyo qaar ka mid ah hadiyadaha kale ee farshaxanka iftiinka leh!
Xayeysiisyadu waxay sameeyaan font, rinji jillaab alaab, daah qurxinta, qurxinta daahyada, dhisida muuqaalka dhulka qurxinta nalalka gudaha iyo dibaddaba, masraxa, iyo baarka.
Si ka fiican sidii aan mooday..oo lagu taliyay ..
Iftiin dhalaalaya oo mugdi ku jira, waxaan qorsheynayaa inaan wax badan ku iibsado midabyo kale
Waan jeclahay waxa fiicnaan lahaa haddii ay yara dheeraan lahayd laakiin waxay leedahay 3 qaab oo waxaan u maleeyay inay ahayd 1 uun, waan jeclahay
Si fiican ayuu u dhalaalayaa, silig ku filan oo dabacsan. Baakaddu waxay timid toddobaad gudaheed.
2 toddobaad ayaa tagay, sawirka waa ka khafiifsan yahay, buluugga nool wuu madoobaaday, inverter wuxuu soo saaraa kaadida. In kasta oo aan jecelahay wax walba) Neon wuxuu xiraa halkee, iyo anigu halkaan baan joogaa)